Uru nke Nintendo mbak na-eto 86% na 8 ụbọchị | Gam akporosis
Nintendo bụ mgbe niile otu n'ime forerunners maka gbanwee ebe egwuregwu dị na nkasi obi ha tinyere egwuregwu vidio ha, arụọla ọrụ nke mere na ọtụtụ ọgbọ jiri ọ bụla nzọ ha na-atụrụ ndụ onwe ha. A hụwo ụlọ ọrụ a mgbe niile dị ka ihe pụrụ iche iji nye ahụmịhe ndị ọzọ. Nhọrọ a edugawokwa ya n'okporo ụzọ nke nnwale, ebe ọ bụ na iji weta ụzọ ọhụụ ọhụụ, ọ dị mkpa ịkọwapụta atụmatụ ndị na-adịghị adị, yabụ ụfọdụ nwere ike ịnọ n'ụzọ ahụ.
Mgbe ihe niile yiri ka ọ bụ eziokwu dị adị ga-abụ nke ga-eweghara ụwa, eziokwu na-abawanye ụba kpatara ọgba aghara dị otú ahụ na tebụl, nke hapụrụ onye ọ bụla ka na-anwa itinye aka n'ihe na-eme ugbu a. Maka Nintendo, mgbe a bịara n'ihe gbasara ego, ọnụ ahịa nke mbak ya ebiligo ugbu a 86% n'ime naanị ụbọchị asatọ ọnụahịa nzụta nke $ 263 ọ bụla.
Ma ọ bụ na ịrị elu nke Pokémon GO, ekwela ka uru nke mbak ya bụrụ na ọnụahịa nke ụlọ ọrụ ahụghị ruo afọ isii. Enweela m ike ikwu otu izu gara aga ka o si eto mbak ya, mana ọ gara n'ihu otu a ruo taa bụ Fraide.
Yabụ ndị nyocha abịakwara n’ihu ikwu na ikekwe Nintendo nwere enweta $ 14 n'ime izu abụọ mbụ nke ọnwa a, ọ bụ ezie na anyị ga-echere ka ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya kwupụta ọnụ ọgụgụ ndị a na eze; ha ga-achọ ya nke ukwuu.
Na mwepụta nke egwuregwu vidiyo a na Spain, ugbu a anyị ga-ege ntị Nye ihe ọ bụla ga-eme maka izu abụọ sochirinụ ka ọ ga-agbasa dị ka ụfụfụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nintendo mbak abawanyewo uru site na 86% na ụbọchị 8
Juan Castillo kwuru dijo
lee ka m siri kwuo eziokwu @ordonezrafa
Zaghachi Juan Castillo